Paragon Residence (Resources Group Global Co., Ltd.) | iMyanmarHouse.com
28292 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး
Paragon Residence သည် ၊ အမှတ် ( 2A ) ၊ ကမ်းနားလမ်း ၊ အလုံမြို့နယ် တွင် Resources Group Global Co,Ltd. ကတည်ဆောက်လျက် ရှိပါသည်။
Paragon Residence ဟာဆိုရင် စုစုပေါင်းအထပ် ၂၇ ထပ်အမြင့်ရှိပြီး အခန်းပေါင်း (၁၁၄ ) ခန်းပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြစ်နဲ့ ကပ်လျက်တည်ဆောက်ထားတာကြောင့် နေထိုင်သူများအတွက် လတ်ဆတ်တဲ့လေကို အမြဲရရှိပြီး River View အရသာကို ရရှိခံစားနိုင်သလို ရွှေတိဂုံဘုရားနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးရဲ့ ခန့်ညားသာယာမှုနဲ့ လှပမှုများကို တွေ့မြင်ခံစားနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၇ ထပ်အမြင့်ရှိပြီး အခန်းပေါင်း (၁၁၄) ခန်းထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ Paragon Residence မှာ 1st Floor တွင် Swimming Pool၊ GYM ခန်းမ ၊ Multi Purpose Hall၊ BBQ Area များရှိမှာဖြစ်ပြီး 2nd to 7th Floor အထိ ကိုတော့ ကားများရပ်နားရန်အတွက် ကားပါကင် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ 8th to 25th အထိကို လူနေအခန်းများအဖြစ် တည်ဆောက်ထားပြီး တစ်လွှာမှာ အခန်း (၆) ခန်းရှိပါရှိပါတယ်။
26th, 27th Floor များကိုတော့ Penth House အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး တစ်လွှာချင်းစီမှာ Penth House (၃) ခန်းစီ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခန်းအမျိုးအစား များနဲ့ Location အပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်များ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းအမျိုးအစားတွေနဲ့ အကျယ်အဝန်းများကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Type A – 1689sqft
Type A 1 – 1689sqft
Type B – 1523sqft
Type B 1 – 1523sqft
Type C – 1654sqft
Type C 1 – 1654sqft
Type D – 3378sqft
Type D 1 – 3378sqft
Type E – 3046sqft
Type E1 – 3046sqft
Type F – 3308sqft
Type F 1 – 3308sqft
အိပ်ခန်းတိုင်းမှာ Split System Aircon များတပ်ဆင်ပေးထားခြင်း၊ ကျွန်းပါကေး(Parquet) ခင်းထားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးထားပြီး Living Room နဲ့ Dining Room များတွင် (Ceramic homogeneous tiles)ကြွေပြားများ ကပ်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခန်းဖွဲ့စည်းပုံအနေနဲ့ကတော့ Living and Dining Room ၊ Bedrooms ၊ Maid's Room ၊
Kitchen နဲ့ Bathroom တွေကို အခန်းအကျယ်အဝန်းပေါ်မူတည်ပြီး ဒီဇိုင်းဆွဲ ထည့်သွင်းတည်ဆောက် ပေးထားပါတယ်။
တည်ဆောက်မှု ပိုင်းကိုလည်း Super Structure အဆင့်ဖြင့် Reinforced concrete frame ၊ Horizontal System ကို RC beams and slabs ၊ Vertical system ကို RC shear walls & RC Columns နဲ့ Brick walls တို့နဲ့ အဆင့်မီ တည်ဆောက်ထားအတွက် အနာဂါတ်သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကနေပါ စိတ်ချရနိုင်ပါတယ်။
ပြတင်းတံခါးတွေဆိုရင်လည်း အထူးခိုင်ခံ့တဲ့ Powder coated aluminium frame with glass တွေကို အသုံးပြုတပ်ဆင်ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
Paragon Residence ကွန်ဒိုမှာ ပါဝင်တဲ့ Facilities တွေကတော့ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ အားကစားရုံ (Gym) ၊ကားပါကင်၊ ရေကူးကန်၊ အသားကင်လုပ်စားရန်နေရာ၊ မွေးနေ့ပါတီပွဲများကျင်းပရာနေရာ၊ ၂၄နာရီလုံခြုံရေး၊ ဓာတ်လှေကား၊ (Portable fire extinguisher at every unit,Fire hose reel,Smoke vent extraction system, Exit lights and emergency lights, Smoke/ Heat detectors, External hydrant,Wet riser များပါဝင်တဲ့အရေးပေါ်မီးသတ်စနစ် ၊ CCTV ကင်မရာ ၊ဘုံရေပေးဝေရေးစနစ်၊ ရေပူစိမ်ကန်၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ထရန်စဖော်မာ၊ မီးစက် စတာတွေကိုလည်းအဆင့်မီ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
အမွတ္ ( 2A ) ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ အလံုျမိဳ႕နယ္
Sin Min Market
Sein Gay Har (Pyay)
Resources Group Global Co., Ltd.
No.(36), Thein Phyu Road, Pazuntaung Township, Yangon, Myanmar